Ncheta nke Taz Bolingo: Ị na-echeta Taz Bolingo orchestra? Ebee ka ha gara? Ụmụ nwanyị na-arụ ọrụ dị mkpa na ụlọ ọrụ egwu na ụwa ... (VIDIO)
Site na: KongoLisolona: August 29, 2020 00: 10 Enweghị asịsa
Ha nyeere aka ịmepụta akwụkwọ ego ma ọ bụ bụrụ abụ iji too Chineke. Ịbụ abụ dị iche iche sitere na ime ihe ike n'ime ụlọ na mmekọrịta ịhụnanya, ikpe na-ezighị ezi n'etiti ọha na eze ka mmejọ ụmụaka, wdg.
N'etiti ọtụtụ otu ndị mere ụwa egwu a jiri mara mma, ọ dị otu ndị nwere naanị "ụmụ nwanyị, ndị oti egwu". Akpọrọ ya "Orchester Taz Bolingo", nke dị na Kinshasa / Zaire (ugbu a DR Congo). Emepụtara ya na mmalite 80s, mana ọ dịteghị aka n'ihi nrụgide dị n'ime.
Ọzọkwa na 1988, otu ụmụ nwanyị ndị nta akụkọ na Kinshasa weghachiri ya wee kpọọ ọtụtụ ụdị Soukous. Dị nnọọ ka ihe mere ndị bụbu ndị òtù, atụkwasịghị ntụkwasị obi malitere, ebubo izu ohi na di na enyi nwoke, enweghị oke nkesa nke uru anakọtara, wdg. Aghọwo ihe a na-ahụkarị.
Nke a mere ka ụfọdụ ndị otu arụkwaghịm; mgbe ahụ ìgwè ahụ dara ọzọ. N'okpuru ebe a bụ vidiyo sitere na otu n'ime egwu egwu ha.